Kabarin’i Vladimir Poutine Tao Amin’ny Fihaonamben’ny Firenena Mikambana: Mihoatra Ny Tenifototra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2015 5:45 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, Català, English
Sary nalefa sy nozarazaraina be teo amin'ny Aterineto tamin'ny fomba tsy nitononana anarana.
Samy namaky kabary ho an'ny hafa ireo mpitondra an-telopolony tany New York ny Alatsinainy 28 Septambra, tamin'ny faha-70 taonan'ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana. Tany Rosia, hetsika tamin'ny media nasiônaly ny kabarin'ny Filoha Vladimir Poutine ho an'ny Firenena Mikambana. Samy nihazakazaka ny handefa io daholo ireo tambajotranà fahitalavitra, ary nalefa mivantana tamin'ny fotoana tsara indrindra ireo fanamarihan'i Poutine. Taorian'ny nahavitany ny fitenenany, nisy resadresaka an-databatra natao hiresadresahana ilay kabary. Tao amin'ilay fahitalavi-panjakana Pervyi Kanal, niady hevitra ireo solontenan'ny fiarahamonina mpanome hevitra hoe nifandahatra tsara tamin'i Barack Obama ve i Poutin sa nifanakaiky tamin'ny vondrom-piarahamonina manerantany.
Ao amin'ny Aterineto, sintonin'ireo mpanao gazety ny fijery ho any amin'ireo tenifototra maromaro izay hita ho toy ny asa fampahafantarana ataon'ireo tambajotranà “bot” (mandeha ho azy) maro. Ny tena malaza amin'izy ireo, “PutinPeacemaker” (PoutineMpandrindraNyFilaminana), toa fikasàna ny hankalazàna ireo ezaky ny Filoha Rosiana hamaha olana amin'ny Ady an-trano Syriana tamin'ny fanohanana ny Filoha Bashar al-Assad. Amin'ny fampiasàna io tenifototra io sy ireo hafa mitovy aminy, misimisy ihany ireo ezaka mba hanaovana hoe toy ny mino tokoa ny fahafahan'i Vladimir Poutine hamaha io fifandirana io sy ireo ny olon-tsotra.
Raha toa ka mora mitombo laza miaraka amin'ny fampiasàna “bots” ireo karazana kisarisary elektronika malaza , somary misimiy olana ihany ny tenifototra ary mora saropady ny fikirakiràna azy.
Manolotra fomba hafa mba hanambàrana ireo bitsika “malaza” ny tolotra TweetDeck, ary toy izany no fomba nanangonana ireto bitsika manaraka mikasika an'i Poutine ireto. Eto ambany eto ianao hahita fanambàrana ireo bitsika milaza ny anaran'i Poutine (notononina amin'ny teny Rosiana) izay in-25 naverina nobitsihana. Afa-tsy iray izay niavaka, tsy nampidirina ireo bitsika avy tamin'ny masoivohom-baovao, sahala amin'ireo bitsika izay nitanisa fotsiny ny zavatra nolazain'i Poutine tamin'ny kabariny, na izay nolazainy tamin'ireo fivoriana taorian'io. Ny hampiseho hoe iza amin'ireo fanehoankevitra momba an'i Poutine no mety indrindra amin'ireo mpampiasa Twitter miteny Rosiana ankehitriny, izay no tanjon'ity lisitra ity.
Ireo Tena Tia an'i Poutine
Bitsika avy tamin'ilay media-mpanjakàna Rosiana RIA Novosti, no voalohany eo amin'ny lisitra, izay te-hilaza hoe nahavita nanao fifanarahana lehibe tamin'i Etazonia i Poutine androany any New York. Mampiasa ny tenifototra #PutinPeacemaker ihany koa ny RIA Novosti, izay tsy dia niseho matetika tao amin'ireo “bitsika tsara indrindra” nangonin'ny TweetDeck, na teo aza ireo ezaky hita mazava fa nampiasàna tambajotranà fitaovana mandeha ho azy.
Tsy nandrisika ny fitadiavana ny hevitra ambadik'ireo sary nandritra ny sakafony tany amin'ny Firenena Mikambana i Poutine. #PutinPeacemaker
Tsoakevitra itambarana momba ny tsidik'i Poutine tany New York ny hoe : manambara ny tsy fahavitan'ny Tandrefana hampitoka-monina an'i Rosia ny fandraisana azy tany Etazonia. Ireo sarin'i Obama sy Poutine misakafo sy mifandray tànana dia nambara ho manaporofo fa ny tena marina, mpikambana tena ilaina ao amin'ny vondrom-piarahamonina manerantany i Rosia, na any amin'ny toerana toa an'i Etazonia aza, izay nanampy ny fitarihana ilay hetsika hanasazy an'i Maosko noho ireo politikany any Okraina.
Ny tena anton'ilay fanokanana.
Vitan'ilay tenifototra #PutinPeacemaker ny nisintona indray mandeha fotsiny ireo famerenana mibitsika maro tao amin'ilay lisitra. Io bitsika io, hita eto ambany, dia hita avy amin'ireo lahatsoratra maro manindrahindra io tenifototra io (afa-tsy hoe nisy mpampiasa Twitter hafa nizara marina azy io). Toy ny bitsiky RIA Novosti, mahita an'i Vladimir Poutine mitsiky sy mampiakatra vera misy divay isika, toa hita ho anaty fakalazàna zavatra.
Ny sary androany.
Tsy misy izany fankalazàn'i Poutine tsy misy fanadrohadroan'ny mpanohitra ara-politika tsy tia an'i Kremlin an'i Rosia izany. Marobe ireo mpandinika nahamarika fa tsy mbola niteny ampahibemaso ny anaran'ilay mpikatroka mafana fo miady amin'ny kolikoly, Alexey Navalny, mihitsy i Poutine, izy io izay raisin'ireo sasany ho lohan'ny mpanohitra. Raha nilaza ireo mpanohana an'i Navalny sy ireo hafa sasany fa noho ny tahotr'i Poutine ny hampitombo ny tanjak'i Navalny amin'ny maha-mpifaninana azy ny fanononany ny anarany no anton'izany; toa mino kosa anefa ireo Rosiana tsy mieritreritra loatra ny lazan'ny tsy tia an'i Kremlin fa fiheboheboana fotsiny ny filazan'ireo mpanohana an'i Navalny momba ny tsy finiavan'i Poutine hiteny ny anarany.
Mbola nanamarika indray ireo mpanohana an'i Alexey Navalny fa tsy nilaza an'i Alexey Navalny mihitsy i Poutine.
Soratra maro avy tamin'ireo mpanohana malaza an'i Poutine no tany anatin'ireo lahatsoratra tena naverina nalefa tamin'ny bitsika maro indrindra. Vonona ny hiteny ho an'ny tany tontolo ilay lehilahy mpanolokevitry ny tanànan'i Moscow, Alexey Lisovenko:
Nihaino tsara ireo kabarin'i Obama sy Poutine androany tany amin'ny Firenena Mikambana aho. Afaka milaza tsy ankihambahamba aho: tokony ho velom-pankankasitrahana ny tany fa manana an'i Poutine.
Nizara torohevitra bebe kokoa ho an'izao tontolo izao ilay kaonty izay nipoitra sy naka tahaka ireo fanambaràna nataon'i Dmitry Kiselyov, mpanentana malaza ao amin'ny fahitalavitra ary lehiben'ny Rossiya Segodnya tena malaza be eo amin'ny faritra, ary tantànan'ny Kremlin:
Nataon'i Poutine mazava tsara hoe hery iray ihany eto an-tany no tokony hanjaka eo amin'ireo hafa rehetra: ny Firenena Mikambana. Ary nazava tsara tamin'ireo firenena rehetra io hafatra io, afa-tsy Etazonia sy ireo zanabolany.
Nanao ny kabarin'i Poutine ho fomba hahafahana manadrohadro ireo Amerikana fotsiny ny mpampiasa Twitter hafa:
Tsy niteny ilay teny hoe “sarimbavy” indray i Poutine, fa samy mahalala daholo ny olona rehetra hoe i Etazonia no resahany.
Fotokevitra nampiasain'ireo mpankafy azy sy ireo mpitsikera azy ilay filazàna an'i Poutine ho manana tosika amin'ny resa-barotra. Ohatra, nilaza ny mpampiasa Twitter iray fa nahavita nampidina ny tsenam-barotra Amerikana ilay kabary henjana be nataon'i Poutine.
Miteny i Poutine, mivarahontsana ny mpanakalo vola.
Tsy mbola tafiala ny Filoha Okraniana Petro Poroshenko., raha oharina amin'ireo fihaonana tsy dia manaitra an'i Poroshenko, lasa nanipaka ireo hanihany momba ny fitokana-monina mitombo hatrany an'i Kiev ireo fandaharam-potoanan'i Poutine miaraka amin'ireo olo-malaza satria efa hifarana ny fotoanan'ny volantatelin'ny fiarahan'i Okraina taorian'ny Maidan amin'ny Tandrefana.
Nihaona tamin'ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana ny Filohan'i Iràna, ny Praiminisitr'i Iràka sy Japàna, ary ny Filoha Obama i Poutine. I Poroshenko kosa nanana fihaonana niaraka tamin'ny tavoahangy misokatra.
Tao anatin'ny sehatry ny fanelezana tsaho mihoampampana momba ny dikan'ireo sary, nisy sarin'i Obama manolotra ny tànany amin'i Poutine, toa hitan'ireo Rosiana mpampiasa Twitter maro ho porofo fa nandainga fotsiny ny Trano Fotsy raha nilaza fa “nitalaho” ny hikarakarana fihaonana eo amin'i Obama sy Poutine i Kremlin.
Tsarovy ireo matoam-baovao Okraniana sy Amerikana momba ny hoe “Poutine mitalaho amin'i Obama mba hisian'ny fihaonana”? Ankehitriny, mazava be hoe iza no nitalaho tamin'iza. 🙂
Ireto Tena Tsy Tia An'i Poutine
Tsy manana ireo tenifototra sy ireo sarin'i Poutine misotro zava-pisotro mahamamo daholo akory ny ireo bitsika malaza indrindra ankehitriny momba ny dian'i Poutine tany amin'ny Firenena Mikambana; nivoaka matanjaka ireo vahoaka tsy tia an'i Poutine, nameno ny Tranonkala tamin'ireo fisainany “snark” manokana sy fanadrohadroana feno hatezerana.
Raha nankalaza ny fahafahan'i Poutine manana dindo eo amin'ny fandraraharàna ao Wall Street ireo Rosiana mpankafy ny Filoha, ireo mpankahala azy kosa nampifandray izany tamin'ny fidinana kelin'ny sandan'ny vola ‘robla’ miohatra amin'ny dollar, nandritra ny kabariny.
POUTINE OINK (fanamarihana: fakàna tàhaka ny feo an'orona fanaon'ny kisoa) FILOHA OOOOINK AN'NY TANY OEEEEEE OOOOOINK
Taorinan'ny fahadisoan'ilay tambajotram-baovao Amerikana CNN, nanafangaro an'i Poutine tamin'i Boris Yeltsin (filoha voalohany taorian'ny fanjakana Sovietika) efa nodimandry, nahita izany ho fahafahana mananihany ny taonan'i Poutine efa mitombo ireo sasany:
Nafangaron'ny CNN tamim-pahadisoana tamin'i Yeltsin i Poutine. Mampiseho izany fa efa maty i Poutine ho an'ny tany mivoatra rehetra.
Satria efa manakaiky ny maherin'ny 15 taona no naha filoham-panjakana an'i Poutine (tafiditra amin'izany ny fotoana naha praiminisitra azy tamin'i Dmitry Medvedev), hita mivaingana ny fieritreretana lava ny fahafatesan'i Poutine. Ho an'ny maro, na ny ao anatin'i Rosia na ireo any ivelany, tsy mety ny misaintsaina Rosia vaovao raha tsy hoe esorina eo mihitsy aloha i Poutine, izay tsy azo eritreretina hiala moramora.
Tsy mampaninona izany raha hihaona amin'i Obama i Poutine. Ny olana dia rehefa izy hihaona amin'i Mouammar Khadafi…
Tsy nahataitra ilay mpitoraka bilaogy tsy tia an'i Kremlin, Kirill Mikhailov, ny fampitandreman'i Poutine ny Tandrefana fa mety hamerina indray ny fahadisoany tamin'i Libya ny ataony any Syria, nilaza io mpitoraka bilaogy io fa efa mihoson-drà sy simba lavitra noho i Libya i Syria.
Tena tsy tian'i Poutine ho lasa sahala amin'i Libya mihitsy i Syria. [Ireto ireo] antontan'isan'ireo tra-boina sy mpitsoa-ponenana tamin'ireo firenena ireo nanomboka ny taona 2011.
Ireo tsy lasan'eritreritra momba izay Poutine maty any, dia maminavina fotsiny ny sarintsarin'ilay Filoha Rosiana eo amin'ny fitsaràna, ohatra hoe noho ny ady any Okraina, na angamba noho ny politika famoretana ao an-toerana. Sarin'i Poutine mipetraka eo ambony seza mialoha ny kabariny tany amin'ny Firenena Mikambana, izay maneho azy ho toy ny bitika kely. Hita ho fitaovana tena mety ho an'ireo hanihany momba an'i “Poutine miatrika fitsaràna” ilay sary.
Rehefa miatrika fitsaràna any La Haye izy, hiatrika ny vondrom-piarahamonina maneran-tany ihany koa i Poutine, miaraka amin'ny polisy ao an-damosiny.
Tsy fanelezana tsahotsaho momba ny fialàn'i Poutine tanteraka daholo akory ireo bitsika tsy tia an'i Poutine rehetra. Tsy niresaka momba ny fahafatesan'i Poutine ilay mpaneho hevitra ara-politika, Andrei Piontkovsky, fa nampitandrina kosa teo andaniny fa mitondra an'i Rosia any amin'ny ady masina iray ao Afovoany Atsinanana i Poutine.
Amin'ny fiarovana an'i Assad, misintona an'i Rosia any amin'ny adim-pivavahana lavareny eo amin'ny Chiites sy Sunnites i Poutine.
Ny farany, vitan'ireo Rosiana sasany mpampiasa Twitter ny nisarika ny mpanaraka tamin'ny alàlan'ny famadihana ambony ambany ny kabary fandresena lahatr'ireo vahoaka mpomba an'i Poutine.
Fanontaniana ho an'ireo mpankafy an'i Poutine any ho any: raha filahiana (tsy alehany) i Obama, kanefa nandray sy nanetsiketsika ny tànany i Poutine, manao an'i Poutine ho inona izany?